Real Madrid oo garaacday kooxda Sevilla, James Rodriguez oo labo jeer shabaqa gaaray iyo macallin Zidane oo guul ugu dabaal dagay sanad guurada shaqadiisa Madrid… + SAWIRRO – Gool FM
(Madrid) 02 Janaayo 2016 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul 3-0 garoonkeeda Santiago Bernabeu kaga gaartay naadiga Sevilla, waxaana kulankan labo jeer shabaqa soo taabtay James Rodriguez.
Kooxda ka dhisan caasimadda Spain ayaa goolka hore la timid kulankan 11-daqiiqo waxaana u dhaliyey James Rodriguez, kaddib kubbad uu ka soo shaqeeyey Casemiro, Real Madrid ayaana ciyaarta ku hoggaamisay 1-0.
Real Madrid ayaa u muuqatay mid qeybta hore ee ciyaarta natiijada dhinac u ridday waxaana goolka labaad u dhaliyey 29’daqiiqo Raphael Varane, kaasoo kulanka ka dhigay 2-0 ay ku gacan sarreeyeen wiilasha Zidane.
Waxa ay Real Madrid heshay goolkeedii saddexaad ee kulankan, waxaana rigoore lagu abaal-mariyey markii ay isku dhaceen Mercado iyo Modric gool u rogay 44’daqiiqo James Rodriguez, kulanka lagu kala nastay 3-0 ay ku gacan sarreeyeen wiilasha Los Blancos.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa dib la isugu soo laabtay kulanka ayaana u muuqday in mar hore lagu kala baxay qeybtiisii koowaad, inkastoo Sevilla ay isku dayday inay natiijada ciyaarta wax ka bedesho haddana ma suuro galin kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-0 ay ku adkaatay kooxda Real Madrid.
Real Madrid oo guul ku furatay sanadka cusub ee 2017 ayaa shaqadii ugu waynayd sii qabsatay ka hor inta ayna kooxda Sevilla ku boqan garoonkeeda kulanka lugta labaad ee Copa Del Rey, dhinaca kalena macallin Zidane ayaa maalintii uu shaqada Real Madrid la wareegay sanad ka hor oo maanta ku beegnayd ugu dabaal dagay guushan wayn ee uu ka gaartay Sevilla.
Muxuu Antonio Conte ka yiri guul daradii xalay ka soo gaartay Tottenham??